A + Mutengesi Kudzivirirwa -
Maitiro Ekuramba uchibva paRuspension radar usingashandise zviuru zvemadhora paSuspension Appeal.
Vatengesi vese vanoziva kuti marongero eAmazon ari kuramba achiomarara zuva nezuva kunyanya vatengesi pavanenge vachiita DropShipping. Kudzivirirwa kweMutengesi kunodzikisa mikana yako yekumisikidza uye inokupa iwe mukana nekuita nekukurumidza paAccount Health zvine chekuita nenyaya.
Nei + Mutengesi Kudzivirirwa Kunokosha?
Wese munhu anoziva kuti Amazon Suspensions ndiyo chaiyo dhiri. 3 pa10 Maakaundi haagadzikiswe kunyangwe mushure mekuendesa maApple akawanda. Kana Akaunti ikamiswa, iwe unoshandisa $ 1k - $ 2k pane kumiswa kwese, uye zvakadaro, hapana IVIMBISO kuti uchaiswa. A + Mutengesi Kudzivirirwa ichachengetedza nguva yako nemari, uye zvakare inoderedza mikana yako yekumiswa kuenda ku80% iyo Mutengi wese ari kutsvaga. A + Mutengesi Kudzivirirwa iri kuita seLifeline yeVatengesi vese veAmazon.
Kusimudzirwa Mikana Yakadzikira Na80%
Zvese kutyorwa kwemitemo kuchagadziriswa nekukurumidza izvo zvinodzora mukana wekumiswa otomatiki
Akaundi Hutano Mune Yakanaka Mamiriro
Kusvika padanho Kutumira mashandiro uye mashandiro evatengi zvichaita kuti account yehutano ive yakanakisa Mamiriro
Kufungidzira Kwemangwana Kusungirwa
Kana iwe ukamiswa kunyange mushure mekugadzirisa nyaya dzese nekukurumidza. Iwe uchave wakafukidzirwa kune ramangwana Kumiswa.
Asingasviki maviri Mhirizhonga Yemutemo kana AZ Mhosva paAccount.
Akaundi Hutano Hwakachena
Kufungidzira Kwemberi Kumiswa
USASHAYA UYE MUKANA WEKUWANA
CHEMAZWI 5% -10% DZIDZO
Kurumidza- Iyi Yekusimudzira Chipo Chinozopera muna:
Iwe une mubvunzo nezve chirongwa ichi? Ona rondedzero pazasi yemibvunzo yedu inowanzo bvunzwa. Kana mubvunzo wako usina kunyorwa pano, ndokumbira utibate.
Ndinogona kusaina here? Kana ini ndine anopfuura maviri mutemo kutyorwa paaccount?
Ehe, Iwe unofanirwa kubhadhara imwe yekuwedzera mari kune yekutanga 4 mwedzi.
Yakawedzera Premium mazwi anotsanangurwa kudzvova :
3-5 Kutyora: $ 49
6-10 Kutyora: $ 99
11-15 Kutyora: $ 149
16-20 Kutyora: $ 199
Kana ndikamiswa mushure mekusaina nechirongwa, ndinofanira kubhadhara chero muripo here?
Iwe unongoda kubhadhara madhora zana ebasa kuitira yedu yekukurumidza chirongwa ($ 100) uye $ 849 yeiyo chirongwa chekutanga ($ 200)
Ko kana ndikamiswa mumwedzi mumwe chete mushure mekunge ndanyorera kuchirongwa ichi?
Iwe unofanirwa kuve nekunyorera kweinenge mwedzi mitatu kuti ufukidzwe nekumiswa. Kana iwe ukamiswa pamberi pemwedzi mitatu iwe unozofanirwa kubhadhara chete / chechitatu cheedu Ekukwidza Tsamba Mapakeji.